Amabali EBhayibhile: UThixo Uvavanya Ukholo Luka-Abraham - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UYAYIBONA na into eyenziwa nguAbraham apha? Uphethe imela, yaye kubonakala ngathi uza kubulala unyana wakhe. Kutheni esenza le nto nje? Okokuqala, masibone indlela uAbraham noSara abamfumana ngayo unyana wabo.
Khumbula, uThixo wabathembisa ukuba babeya kufumana unyana. Kodwa loo nto yabonakala ingenakwenzeka, kuba uAbraham noSara babebadala gqitha. Noko ke, uAbraham wakholwa ukuba uThixo unokwenza izinto ekubonakala zingenakwenzeka. Ngoko kwenzeka ntoni?
Akuba uThixo enze eso sithembiso, kwadlula unyaka wonke. Kwathi ke, xa uAbraham wayene-100 leminyaka ubudala uSara enama-90 eminyaka ubudala, bafumana umntwana oyinkwenkwe ogama linguIsake. UThixo wayesigcinile isithembiso sakhe!
Kodwa ekukhuleni kukaIsake, uYehova waluvavanya ukholo luka-Abraham. Wambiza: ‘Abraham!’ Waphendula uAbraham: ‘Ndilapha!’ Wathi uThixo: ‘Thabatha unyana wakho, okuphela kwakhe uIsake, uye kwintaba endokubonisa yona. Ekuﬁkeni kwakho apho mbulale unyana wakho uze umnikele kum njengedini.’
Hayi indlela awaba buhlungu ngayo uAbraham ngenxa yaloo mazwi, kuba uAbraham wayemthanda kunene unyana wakhe. Yaye khumbula, uThixo wayethembise ukuba abantwana baka-Abraham babeya kuhlala kwilizwe lakwaKanan. Kodwa yayinokwenzeka njani loo nto ukuba uIsake wayeﬁle? UAbraham wayengakuqondi kakuhle oko, sekunjalo wamthobela uThixo.
Ekuﬁkeni kwakhe entabeni, uAbraham wambopha uIsake wambeka phezu kwesibingelelo. Wathabatha imela ukuze abulale unyana wakhe. Kodwa ngaloo mzuzu ingelosi kaThixo yamemeza: ‘Abraham, Abraham!’ Waphendula uAbraham: ‘Ndilapha!’
‘Musa ukuyenzakalisa inkwenkwe, musa ukuyenza nto,’ utsho uThixo. ‘Ngoku ndiyazi ukuba unokholo kum, kuba akukhange wale nonyana wakho kum, ekuphela kwakhe.’
Olunjani ukuba lukhulu ukholo awayenalo uAbraham kuThixo! Wayekholelwa ukuba akukho nto inokumnqabela uYehova, nokuba uYehova unokumvusa nakwabaﬁleyo uIsake. Kodwa ngokwenene yayingekuko ukuthanda kukaThixo ukuba uAbraham ambulale uIsake. Ngoko uThixo wabangela ukuba igusha ibambeke etyholweni elikufutshane, waza wathi kuAbraham makanikele yona njengedini kunonyana wakhe.
Sisiphi isithembiso uThixo awasenza kuAbraham, yaye uThixo wasigcina njani isithembiso sakhe?
Njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso, uThixo waluvavanya njani ukholo luka-Abraham?
Wenza ntoni uAbraham nangona wayengasiqondi isizathu sokuba uThixo amyalele oko?
Kwenzeka ntoni xa uAbraham wayethabatha imela eza kubulala unyana wakhe?
Lwalomelele kangakanani ukholo luka-Abraham kuThixo?
UThixo wambonisa ntoni uAbraham ukuze abingelele ngayo, yaye wakwenza njani oko?
Funda iGenesis 21:1-7.
Kwakutheni ukuze uAbraham aluse unyana wakhe ngosuku lwesibhozo? (Gen. 17:10-12; 21:4)
Funda iGenesis 22:1-18.
UIsake wabonisa njani ukuba uyamhlonela uyise, uAbraham, yaye oku kwakusifuzisela njani isiganeko esibalulekileyo esasiza kwenzeka? (Gen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)